DEG-DEG: Champions League Oo La Siinayo PSG, Waxa Laga Yeelayo Europe League & Super League Oo Dunida Kubadda Cagta Gilgilay - Laacib
HomeBundesligaDEG-DEG: Champions League Oo La Siinayo PSG, Waxa Laga Yeelayo Europe League & Super League Oo Dunida Kubadda Cagta Gilgilay
DEG-DEG: Champions League Oo La Siinayo PSG, Waxa Laga Yeelayo Europe League & Super League Oo Dunida Kubadda Cagta Gilgilay
April 19, 2021 Saed Mohamed Bundesliga, PSG, Serie A, Wararka Champions League, Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka La Liga, Wararka Premier League 0
Kooxda ree France ee Paris Saint-Germain ayaa noqon karta mida faa’idada ugu weyn ka samaysa tartanka cusub ee la sheegay in 12 kamida kooxaha ugu waaweyn Yurub ay iskugu tagayaan ee European Super League oo ahaa hadal haynta ugu weyn ee kubadda cagta ilaa shalay.
Marka laga yimaado inay tahay mid kamida kooxaha ugu qanisan dunida, PSG ayaan lagu darin liiska kooxaha asaaska u ah European Super League si lamid ah Bayern Munich iyo Borussia Dortmund.
12-ka kooxood ee liiskaas kusoo baxay ayay kamid yihiin Manchester City, Chelsea iyo Real Madrid oo dhammaantood soo gaadhay afar dhammaadka Champions League.
Hal abuurka tartankan cusub ayaa halis galiyay xidhiidhka kubadda cagta Yurub ee UEFA kaas oo ku hanjabay inay ganaaxi doonaan kooxaha iyo ciyaaryahanada ka qayb qaata tartankaas.
Talaabo deg-deg ah oo ay UEFA ku ciqaabaan kooxaha hawshaas wada ayaa dhalin karta in Champions League laga cidhib tiro Chelsea, Real Madrid iyo Man City taas oo Paris ka dhigaysa kooxda loo caleemo saaro Champions League xilli ciyaareedkan.
Dhinaca kale UEFA Europe League oo ay afar dhammaadkiisa iskugu yimaadeen Man United, Arsenal, Villarreal iyo AS Roma ayaa Final-kiisa toos loo wada ciyaarsiin karaa Villarreal iyo Roma iyadoo meesha laga saarayo Red Devils iyo Gunners oo qayb ka ah 12-ka kooxood ee European Super League inay ku biiraan saxeexay.
Marka laga yimaado wararka xanta ah ee la helayo, wali UEFA ayaan waxba ka bedelin sidii ay ahaayeen kulamada afar dhammaadka Champions League iyo Europe League.
Saddexda kooxood ee kala ah labada ugu waaweyn kubadda cagta Germany ee Dortmund iyo Bayern iyo waliba Paris Saint-Germain ayaa iyagu diiday inay ku biiraan European Super League iyaga oo sheegay inay daacad u yihiin UEFA sida uu sheegayo wargeyska RMC Sport.